Yintoni iVolatility? -Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Yintoni iVolatility?
tag: Bitcoin, IBVOL, ethereum, Litecoin, Ukuguquguquka
Kwezemali, ukungazinzi kuchaza ukuba likhawuleza kangakanani kwaye ixabiso leasethi litshintsha njani. Ihlala ibalwa ngokwe- ukuphambuka okuqhelekileyo imbuyekezo yonyaka yempahla yexabiso kwithuba elithile. Kuba ngumlinganiso wesantya kunye nenqanaba lotshintsho lwamaxabiso, ukungazinzi kuhlala kusetyenziswa njengenyathelo elisebenzayo lomngcipheko wotyalo-mali kuyo nayiphi na i-asethi.
Ukungazinzi kwiimarike zemveli
Ukunyaniseka kuhlala kuxoxwa ngako kwimarike yemasheya, kwaye ngenxa yokubaluleka kwayo kuvavanyo lomngcipheko, kukho iinkqubo ezimiselweyo kwiimarike zesiko (ezibizwa ngokuba indices zokungazinziukulinganisa kunye nokulindela amanqanaba okuguquguquka kwexesha elizayo. Umzekelo, iChannel yeChicago yeBhodi yoTshintshiselwano ngeXabiso leVolatility Index (VIX) isetyenziswa kwimarike yemasheya yaseMelika. Isalathiso se-VIX sisebenzisa i-S & P 500 yamaxabiso okhetho lwesitokhwe ukulinganisa ukungazinzi kweemarike ngaphezulu kweentsuku ezingama-30.
Ngelixa ubukhulu becala kunxulunyaniswa namashishini, ukungazithembi kubalulekile kwenye intengiso yemveli. Ngo-2014, i-CBOE yasungula isalathiso esitsha sokungazinzi koovimba base-US abaneminyaka elishumi abathatha intembeko kubatyali mali kunye nomngcipheko kwimarike yebhondi. Ngelixa zimbalwa izixhobo ezikhoyo zokulinganisa, ukungazinzi ikwayinto ebalulekileyo ekuvavanyeni amathuba kwintengiso yotshintshiselwano lwangaphandle.
Ukunyaniseka kwiimarike ze-cryptocurrency
Njengakwezinye iimarike, ukungazinzi yinto ebalulekileyo yomngcipheko kwiimarike ze-cryptocurrency.
Ngenxa yendalo yabo yedijithali, inqanaba labo eliphantsi lommiselo (Ugunyaziso oluNgcwele) kunye nobukhulu obuncinci bemakethi, ii-cryptocurrensets ziguqukile ngakumbi kunezinye iiklasi ezininzi zeasethi.
Eli nqanaba liphezulu lokungazinzi kwelinye icala linoxanduva lokuvuselela inzala kutyalo-mali lwe-cryptocurrency, njengoko ivumele abanye abatyali mali ukuba bafumane imbuyekezo enkulu ngexesha elifutshane. Ukunyibilika kwiimarike ze-cryptocurrency kunokwenzeka ukuba kwehle ixesha elide ngenxa yokwamkelwa ngokubanzi kwemakethi kunye nokukhula kunye nommiselo ongaphezulu.
Njengoko iimarike ze-cryptocurrency sele zikhule ngakumbi, abatyali mali banomdla wokulinganisa ukungazinzi kwabo. Ngesi sizathu, ii-indices zokuguquguquka ngoku zikhona kwezinye zeemali ezinkulu ezixabisekileyo. Eyona nto iphawuleka kakhulu yi-Bitcoin Volatility Index (BVOL), kodwa kukho ii-indices ezifanayo zokulandelela ezinye iimarike ze-cryptocurrency, kubandakanya i-Ethereum kunye neLitecoin.
Inqaku langaphambiliYintoni eQobayo kwihlabathi lee-Cryptocurrensets?
Inqaku elilandelayoYintoni i-Ethereum?
Yintoni iSwan Swan? Sichaza isiganeko seMnyama Swan.